Ciidamada Booliska oo qabtay Bambooyin iyo Qaraxyo la diyaarinayey (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ciidamada Booliska oo qabtay Bambooyin iyo Qaraxyo la diyaarinayey (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Booliska oo qabtay Bambooyin iyo Qaraxyo la diyaarinayey (Sawirro)
Howlgal ay sameeyeen ciidamada Booliska ayaa lagu soo qabtay miinooyin iyo waxyaabaha qarxa oo la diyaarinayey.
Taliska ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgal qorsheysan oo ciidanka gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada Booliska ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay agabka qaraxyada.
Afhayeenka ciidamada Booliska Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in cutubka la-dagaallanka Argagixisa Boliiska Soomaaliya ee howlgalka ka fuliyay Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose ay gacanta ku soo dhigeen Miinooyin Farsamo ku socotay, Banbaanooyin Gacmeedyo iyo Baaruuda Miinooyinka loo isticmaalo.
Previous articleQarax ka dhacay Saldhigga Booliska Beledweyne iyo Mas’uuliyiin Dhimasho iyo dhaawac ku noqday
Next articleMagaca Ninkii Soomaaligii ahaa ee dilay xildhibaanka Ingiriiska oo la shaaciyey iyo Aabihiis oo hadlay..